Goorma ay dib isu heli doonaan saddex afleydii mar dunida ugu halista badnaa “BBC?” – Gool FM
Goorma ay dib isu heli doonaan saddex afleydii mar dunida ugu halista badnaa “BBC?”
Kaafi January 20, 2018
(Madrid) 20 Jan 2018. Zinadine Zidane ugu dambeyn waxa uu fursad u heli doonaa in uu wada safo saddex afleydii mar ahaa kuwa ugu halista badan aduunka Gareth Bale, Karim Benzema iyo Cristiano Ronaldo 270 maalmood kaddid oo dhaawac u suurtagalin waayey.
Kulanka ugu horreeya ee ay ka soo wada muuqan karaan waa midka toddobaadkan ee ay Deportivo La Coruna la leeyihiin, Bale iyo Ronaldo iyagu waa la hubaa halka Benzema oo dhaawac ka soo kacay isna la filayo.
Haddii ay dhici weyso kulanka Depo waxa ay is heli doonaan toddobaadka dambe iyo Valencia.
Hadafka ugu weyn ee soo laabashadooda waa in ay goolal dhaliyaan, kolkan 28 gool ayey isku darkooda dhaliyeen, 16 oo uu leeyahay Ronaldo, 7 Bale halka uu 5 dhaliyey Benzema.
Maxaa ka jira in Pele la dhigay Cisbitaal?
Wenger oo ugu danbayntii xaqiijiyay in Alexis Sanchez uu joogo magaalada Manchester